China pp corrugated ntụgharị igbe na etiti Manufacturer na Supplier | Sihai
Enwere ike iji igbe pp oghere dị n'ime ọtụtụ ọrụ, dịka nkwakọ ngwaahịa, mbupu, igbe ntụgharị, nchekwa, ụlọ nkwakọba ihe, ibupu ngwaahịa na ihe ndị ọzọ. The p corrugated etiti igbe nwekwara ike ịbụ ESD igbe na conductive igbe, ọtụtụ-eji ngwá electronic, ngwá electronic ngwaahịa, ngwá electronic akụkụ ntụgharị, ekwentị akụkụ na akpaaka akụkụ mbupu na ntụgharị.
Pp corrugated ntụgharị igbe dị ka onye ọrụ chọrọ nwere ike ahaziri mere dị iche iche nkọwa, nha, aluminum alloy cover onu, nwere ike capped, dustproof, mara mma na-emesapụ aka anya. Igbe pp corrugated ntụgharị bu Non-egbu egbu, enweghi uto, mmiri na-egosi, waterproof, corrosion eguzogide, ìhè arọ, inogide, stackable, ọmarịcha anya, ọgaranya na agba, dị ọcha, recyclable, gburugburu ebe obibi-echebe, ọ dịghị mmetọ na ndị ọzọ e ji mara.
Uru nke "igbe ntụgharị" ga-abụrịrị onye ọ bụla maara. Ọ bụ environmentally friendly, inogide, echekwa na-adaba adaba. Ya mere, igbe ntụgharị bụ ihe a na-apụghị ịkewapụ na ngwa ngwa obodo m na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. E nwere ọtụtụ ụdị akụrụngwa maka imepụta ihe, nke ọ bụla bụ PP oghere. Ihe nke osisi.
Nkịtị oghere osisi ngwaahịa nwere uru nke waterproof, mmiri na-àmà, mgbochi corrosion, mgbochi vibration, ìhè arọ, wdg N'ụzọ bụ isi, ọ dịghị adịghị emezi emezi. Ọ gwụla ma onye ahịa ahụ chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ igbe ndị gafere ibu na-ebu ibu nke igbe ntụgharị igbe, mgbe ahụ, ngwaahịa ndị ọzọ dịka (Igbe ntụgharị igbe, igbe mkpuchi) na ngwaahịa ndị ọzọ edochila anya, mana ọnụahịa ya bụ ọtụtụ oge nke oghere mbadamba. Ọzọkwa, igbe ntụgharị plastik na igbe mkpuchi na-enwekwa ọtụtụ ọghọm:
A na-akpọkwa igbe ntụgharị plastic ma ọ bụ igbe ntụgharị Pee. Ha nwere ike ịgbawa n'ebe ugwu ma ọ bụ n'ihi obere okpomọkụ n'oge oyi. Ọ bụrụ na ejiri ihe ndị toro eto mee ihe maka iguzogide okpomoku dị ala, ọ nwere ike ime ka igbe ahụ dum dị arọ. Ibu ahụ na-eme ka ndị ọrụ nwee mmetụta siri ike na njem na njikwa, ọnụahịa igbe ahụ ga-adị oke ọnụ karịa mmụba, ọ ga-enwekwa mmetụta ụfọdụ na ọdịmma akụ na ụba nke onye ọ bụla. N'ikwu okwu n'ozuzu, uru nke igbe ntụgharị plastik karịrị ọghọm ya, ọ dịkwa ezigbo mfe iji. Ọtụtụ ndị ka dị njikere ịhọrọ igbe ntụgharị nke ihe a.
Nke gara aga: p corrugated nchekwa onu
Osote: pp oghere kalama pad